राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चिह्न दियो, कसलाई कुन चुनाव चिन्ह ? | suryakhabar.com
Home राजनीति राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चिह्न दियो, कसलाई कुन चुनाव चिन्ह ?
राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चिह्न दियो, कसलाई कुन चुनाव चिन्ह ?
on: January 19, 2018 In: राजनीतिTags: कसलाई कुन चुनाव चिन्ह ?, राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चिह्न दियोNo Comments
काठमाण्डौ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २१ वटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ ।
Tags: कसलाई कुन चुनाव चिन्ह ?राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले चिह्न दियो